Miguel Hernandez. Makore 110 nyanduri asingafi. Sarudzo | Zvazvino Zvinyorwa
Don Miguel Hernandez akaberekwa muOrihuela apfuura 110 makore zuva rakaita nhasi. Imwe yeiyo vadetembi vakuru uye vakakosha veSpanish zvinyorwa vakatisiyira isu vachiri vadiki uye vadiki kwazvo. Gore rino raivewo makore makumi manomwe nemashanu ekufa kwake muna 75 kubva kutibhii. Asi wega Gumiguru 1942 tinopemberera zvakare kuti ndeyedu, kuti yakanyora nemutauro wedu wakanaka uye kuti yakatisiya inhaka yemavhesi akanaka kwazvo izvo zvinogona kuwanikwa.
Hondo dzinosuruvarisa, Vashandi vezuva, Rwiyo rwekupedzisira, Onion nana, Maoko… Dzakawanda uye dzakanaka kwazvo. Yakakodzera izvi zvakapusa mutero kune chimiro chake uye hunyanzvi kuyeuka chikamu chebasa rake aine kusarudzwa yemavhesi andinofarira.
2 Kusarudzwa kwendima
2.1 Onion nana
2.2 Miti yemiorivhi
2.3 Mwana wehusiku
2.4 Rwiyo rwemurume wemusoja
2.6 Ndinodana nzombe yeSpain
Akazvarirwa mukati Orihuela musi waGumiguru 30, 1910 uye aive zvakare mutambi wemitambo kunze kwekuve mudetembi. Yaibva kuna mhuri inozvininipisa uye aifanira kusiya chikoro kare kuti aende kunoshanda semufundisi. Asi yaive muverengi mukuru wenziyo dzekare (Garcilaso, Góngora, Quevedo kana San Juan de la Cruz) uye nekudaro akawana kurudziro uye kugona kwake nhetembo.
Yakanga ichibva 1930 payakatanga shambadza nhetembo yake mumagazini senge Guta reOrihuela o Zuva reAlicante. Mumakore gumi iwayo akaenda Madrid uye akashandawo muzvinyorwa zvakasiyana, izvo zvaimutendera kusangana nevamwe vadetembi venguva iyoyo. Pakadzoka Orihuela akanyora Nyanzvi muMwedzi, uko iwe kwaunogona kuona pesvedzero yevanyori yaakaverenga muhudiki hwake uye neavo vaakasangana navo parwendo irworwo rweMadrid.
Paakadzokera kuMadrid kunogara pasi, akashanda sa mupepeti in the Cossío's bullfighting duramazwi uye mu Dzidziso dzekudzidzisa yakapihwa naAlejandro Casona. Zviri mumakore aya paakanyora nhetembo senge Muridzo wakatyorwa e Mufananidzo wetsoka yako, uye inozivikanwa zvikuru Mheni isingamiri.
Munguva yeHondo Yenyika rakanyorwa Village mhepo y Munhu anoteya, mazita ezvinonzi "nhetembo dzehondo." Mushure mekurwa, akaedza kubva kuSpain, asi akasungwa pamuganhu nePortugal. Yake mutongo werufu pakutanga zvakachinjirwa kune izvo zve makore makumi matatu. Mujeri zvakapera Rwiyo rwiyo uye mabharadhi ekusavapo. Asi akarwara tuberculosis uye akafa muna Kurume 28, 1942 mujeri reAlicante.
Zvichida yenhetembo dzake dzakanaka kwazvo uye dzinovhundutsa kuti nyanduri akanyora ari mutirongo achipindura tsamba yemukadzi wake. Vakanga varasikirwa nemwana wavo wekutanga gore rapfuura uye akamuudza kuti mumazuva iwayo aingodya chingwa nehanyanisi.
yakavharwa uye murombo.
Chando chemazuva ako
chando nhema uye chando
hombe uye denderedzwa.
mwana wangu aive.
Asi ropa rako
shinda neshinda yakadururwa
kuti ndinokuunzira mwedzi
Raki reimba yangu,
Iko kuseka kwako mumaziso ako
kuti mweya wangu unzwe iwe
Kuseka kwako kunondisunungura
moyo uri pamuromo wako
Yakabatana nemvura yakachena
vatatu vakapa runako
Simuka, iwe muorivhi wachena,
vakadaro pazasi pemhepo.
Uye muorivhi wakasimudza ruoko
nheyo yakasimba. […]
Kuseka, kunyatso kuseka zuva,
mwana wandaida kunyudzwa kaviri muhusiku.
Ndakanga ndisisade mwenje zvekare. Kuti? Hazvaibuda
zvakawanda zvekunyarara uye nerima iro.
Ini ndaida kuve… Yei?… Ndaida kusvika ndichifara
kusvika pakati penzvimbo yezvose zviriko.
Ini ndaida kuunza kuseka sechinhu chakanakisa.
Ndakafa ndichinyemwerera zvine shungu.
Mwana kaviri mwana: katatu kuuya.
Tenderera zvakare kuburikidza neiyo opaque nyika yedumbu.
Dzokera shure, rudo. Dzokera shure, mwana, nekuti ini handidi
enda kunze uko mwenje unowana kusuwa kukuru. […]
Rwiyo rwemurume wemusoja
Ndakagarisa dumbu rako nerudo nekudyara,
Ini ndakawedzera maungira eropa andinopindura
uye ini ndinomirira pane muforo panomirira gejo.
Brunette ine shongwe dzakakwirira, mwenje wakakwirira uye maziso akakwirira,
mukadzi weganda rangu, chinwiwa chikuru chehupenyu hwangu,
mazamu ako anopenga anokura kwandiri achisvetuka
Zvinotoratidzika kwandiri kuti uri sekristaro yakashata,
Ndinotya kuti iwe uchandityora kana kugumburwa kuduku,
uye simbisa tsinga dzako neganda rangu remusoja
kunze kunge muti wecheri.
Mirror yenyama yangu, kutsigirwa kwemapapiro angu,
Ini ndinokupa hupenyu murufu rwavanondipa uye ini handitore.
Mukadzi, mukadzi, ndinoda kuti ukomberedzwe nemabara,
aishuva mutobvu. […]
Muromo unodhonza muromo wangu:
muromo kuti unobva kure kure
Alba iyo iwe yaunopa kune angu husiku
kutsvuka uye kuchena kupenya.
Muromo uzere nemiromo:
shiri izere neshiri
Rwiyo runodzosera mapapiro
kumusoro uye pasi.
Rufu rwakaderedzwa kutsvoda
nyota kufa zvishoma nezvishoma,
munopa huswa hunobuda ropa
mavhiri maviri omoto.
Muromo uri pamusoro pedenga
nepasi mumwe muromo.
Tsvoda iyo inotenderera mumumvuri:
kubva kumakuva ekutanga
kusvikira nyeredzi dzekupedzisira.
Astro ine muromo wako
kusvikira kubatika kwebhuruu
anoita kuti maziso ako azungunuke. […]
Ndinodana nzombe yeSpain
Simuka, nzombe yeSpain: simuka, muka.
Muka zvachose, nzombe furo nhema,
kuti iwe unofema mwenje uye ubudise mumvuri,
uye iwe unotarisisa makungwa pasi peganda rako rakavharwa.
Muka zvachose, ndinokuona wakarara,
chidimbu chechipfuva uye chimwe chemusoro:
kuti hausati wamuka semombe inomuka
paanorwiswa nekutengesa kwemhumhi.
Pfekedza simba rako, pfumisa mafupa ako,
simudza huma yako nematemo anorira,
nemidziyo miviri yekutyisidzira nyeredzi,
kutyisidzira denga nezvipenga zvedambudziko.
Kwayakabva iyo biography: Instituto Cervantes
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhetembo » Miguel Hernandez. Makore 110 nyanduri asingafi. Kusarudzwa kwenhetembo